Import Video / Photo / Audio faịlụ ka iMovie
Mbubata dị iche iche nke Media ka iMovie
iMovie-achọ ka ị Ibu Ibu media n'ime oru ngo nke mere na ị nwere ike n'ihu dezie ha. Faịlụ na ị mbubata nwere ike dị iche iche na codec na formats. Otú ọ dị, usoro ihe omume na-adịghị aghọta niile faịlụ ma ejedebeghị ole na ole dakọtara formats. Ebe a bụ ụfọdụ iMovie Atụmatụ ka guputa otú mbubata dị iche iche nke usoro mgbasa ozi.
Nkebi nke 1: Import video faịlụ ka iMovie Part 2: Import foto / ọdịyo faịlụ ka iMovie Part 3: Import YouTube videos ka iMovie
Part 1: Bubata video faịlụ ka iMovie
Iji mee ka ihe nkiri na iMovie, ị kwesịrị ị mbụ nyefee fim a dị iche iche isi iyi na-iMovie. Dị ka iMovie bụ isi e mere iji mbubata videos si dị iche iche ngwaọrụ, ị nwere ike mfe mbubata videos si:
Teepu dabeere camcorder
Ebe nchekwa dabeere camcorder
1. Import vidiyo si na teepu dabeere camcorder
Nzọụkwụ 1. Jikọọ camcorder ka Mac
Tụgharịa na camcorder na ka ọ VTR ma ọ bụ VCR mode. Mepee iMovie na jikọọ na camcorder ka Mac na USB. Mgbe ahụ elu Pop Bubata window (ma ọ bụrụ na Bubata window anaghị emeghe, họrọ File> Bubata si Igwefoto).
Nzọụkwụ 2. Nịm Automatic / Manual mgba ọkụ
Akpaka Mbubata niile nke video na teepu, na rewinds teepu ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eji a nhọrọ, pịa OK. Manual-enyere gị aka mbubata naanị footage ị chọrọ. Ị nwere ike iji njikwa ka gị teepu ruo n'ókè ebe ị chọrọ ka na-amalite importing. Mgbe ahụ, pịa Import ịzọpụta gị video na ọnọdụ nke gị nhọrọ.
Nzọụkwụ 3. Tinye gị video ka oru ngo
Mgbe ahụ, ike ọhụrụ omume ma ọ bụ otu dị na omume ma ọ bụrụ na ị nwere otu.
2. Import videos si na ebe nchekwa dabeere camcorder
Tụgharịa na gị igwefoto na ka ọ PC Jikọọ mode. Mepee iMovie na jikọọ na igwefoto gị na kọmputa na USB. Mgbe ahụ Import window ga-gbapụta (ma ọ bụrụ na Bubata window anaghị emeghe, họrọ File> "Import si Igwefoto").
Nzọụkwụ 2. mbubata video ị chọrọ
Mbubata mkpachị niile, setịpụrụ Automatic / Manual mgba ọkụ ka Automatic, wee pịa Import All. N'aka nke ọzọ, setịpụrụ ngbanwe na ntuziaka na mbubata kpọmkwem mkpachị, wee pịa Import enyocha. Mgbe ahụ, ịzọpụta video na ọnọdụ na-amasị gị.
3.Import vidiyo si na ẹdude fim
Ọ bụghị ihe niile nke video ị chọrọ na-echekwara na a camcorder. Ị nwere ike ụfọdụ oyiri mkpachị na gị Mac. Tupu ị mbubata ndị a video faịlụ ka iMovie, ị kwesịrị ị ego ma na ha na-akwado site na iMovie mbụ:
Akwado Import Formats
Rịba ama: N'agbanyeghị iMovie akwado ndị a formats, ọ bụghị mgbe nile ọ bụrụ na ị na-agbalị mbubata ha ka ha iMovie. Dozie nsogbu, dị nnọọ tọghata faịlụ ka iMovie dakọtara formats na iji usoro e kwuru okwu n'okpuru.
-Anaghị akwado Formats
Ọ bụrụ na faịlụ format bụ dakọtara na iMovie, ị nwere ike mfe click File> Bubata> Movies ... iji ha. Dị ka anaghị akwado formats, ị nwere iji tọghata ha ka ha iMovie dakọtara formats tupu importing. Ebe a ihe niile na-na-otu iMovie Ntụgharị: Video Converter Ultimate for Mac ukwuu tụrụ aro. Ya mfe atọghata ihe karịrị 400 formats ka iMovie na-enweghị àgwà ọnwụ. Soro nzọụkwụ n'okpuru iji tọghata videos ka iMovie.
Nzọụkwụ 1. Ibu Ibu gị mgbasa ozi faịlụ
Na ya Media Nchọgharị nyere, ị nwere ike mfe ịhụ gị Obodo media faịlụ na ịdọrọ ha kpọmkwem n'ime usoro ihe omume window maka converting. Dị nnọọ pịa Import button, Media Nchọgharị window ga-gbapụta.
Nzọụkwụ 2. Họrọ iMovie dị ka mmepụta format
Pịa na ala format icon ikpughe mmepụta panel. E nwere a dịgasị iche iche nke video na ọdịyo usoro maka mmepụta. Ị nwere ike họrọ MOV, MP4, M4V, dị iMovie enyi na enyi format ka mmepụta. Mma, ị nwere ike ozugbo họrọ ahazi presets maka iMovie, ma ọ bụ nwa afọ codecs dị ka ProRes, Apple Intermediate Codec iji hụ na kacha mma n'ihi mgbe edezi na iMovie.
Nzọụkwụ 3. Malite akakabarede usoro
Mgbe ahọrọ gị chọrọ mmepụta format, ugbu a, dị nnọọ kụrụ tọghata na-amalite converting videos ka iMovie maka Mac. Mgbe akakabarede a mere, họrọ File> Bubata> Movies mbubata video faịlụ ka iMovie.
Part 2: Bubata foto & ọdịyo faịlụ ka iMovie
iMovie-enye gị ohere tinye foto na audio faịlụ gị fim na-eme ka ihe nkiri ọzọ nkà. Ọ bụ ike mgbe niile. Dị nnọọ na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
Tinye foto faịlụ site na iPhoto ma ọ bụ PhotoBooth
Tinye ọdịyo faịlụ site iTunes ma ọ bụ GarageBand
Nzọụkwụ 1. Mepee foto gị ọbá akwụkwọ
Họrọ Windows> Photos ma ọ bụ see "Photos" button, nke anya dị ka a igwefoto na toolbar.
Nzọụkwụ 2. Họrọ na ịgbakwunye foto na ị chọrọ
Pịa na dropdown ịnyagharịa gị oyiyi site na-ahọpụta ngwa (iPhoto ma ọ bụ PhotoBooth) na e dere gị faịlụ. A ndepụta nke ihe oyiyi ga-egosi na ihe oyiyi n'ọbá akwụkwọ window. Ọ bụrụ na ị maara aha nke foto, ị pụrụ ịchọ ya na search ubi.
Mbubata foto gị Project usoro iheomume, pịa na ịdọrọ ndị họrọ foto n'ime usoro iheomume.
Nzọụkwụ 3. Gbanwee foto faịlụ
Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịgbanwe ndabara ntọala nke foto clip, pịa gear na ala n'akụkụ aka ekpe nke foto clip.
Kụrụ "Clip Mgbanwe" na onye soja menu na-egosi, ebe ị nwere ike ịtọ oge nke foto na-egosipụta oge ma ọ bụ họrọ a video mmetụta. I nwekwara ike kụrụ "cropping, Ken Burns & adiana" hazie foto gị. Mgbe niile ntọala, pịa "Emela" ịrụcha agbanwe.
Nzọụkwụ 1. Open egwu na nsonaazụ ụda nchọgharị
Họrọ Ohere> Music na Sound mmetụta ma ọ bụ pịa "Music na Sound mmetụta" bọtịnụ na iMovie toolbar na-ewetara ndị Music na Sound Mmetụta nchọgharị.
Nzọụkwụ 2. Họrọ na ịgbakwunye music ị chọrọ
Pịa na dropdown ịnyagharịa gị ọdịyo faịlụ site na-ahọpụta ngwa (iTunes, GarageBand) ma ọ bụ nchekwa na e dere gị faịlụ. Ị nwere ike iji Search ubi ịchọta audio faịlụ na ị chọrọ site aha.
Iji tinye audio faịlụ gị Project usoro iheomume, pịa na ịdọrọ ọdịyo faịlụ n'ime usoro iheomume.
Nzọụkwụ 3. Gbanwee ọdịyo faịlụ
Họrọ ọdịyo clip, pịa gear na-ahọrọ "Clip trimmer", "Clip Mgbanwe" na "Audio Mgbanwe" hazie gị iMovie ndabere music. Ị nwere ike ewepụtụ music, ịhazie olu na ịtọ audio ichabo na, ịjụ oyi si mmetụta, wdg
Nkebi nke 3: Import YouTube videos ka iMovie
Nwere ike ịbụ na ọtụtụ na-akpali vidiyo na YouTube ma na-achọ ka ha ọzọ nkecha na iMovie. Ebe a ihe dị mfe na-eji online video Downloader na Ntụgharị - Allmytube maka Mac na ẹkenam-enyere gị aka mbubata YouTube videos ka iMovie. Ọ dị mfe na-eji na-enyere gị aka Downloads YouTube listi ọkpụkpọ, ọwa, na ndebanye aha na batches.
Nzọụkwụ 1. Download YouTube videos mfe
Wụnye YouTube Downloader. Chọta ọkacha mmasị gị YouTube videos na-egwu ha na e nwere ndị abụọ ụzọ ibudata videos:
Method 1: Detuo url nke YouTube video na-aga nbudata window pịa Paste URL bọtịnụ.
Usoro 2: Pịa Download button n'elu nri akuku nke video.
Nzọụkwụ 2. tọghata a iMovie enyi na enyi format
Lelee video faịlụ na ebudatara n'ọbá akwụkwọ na pịa tọghata bọtịnụ na nri. Họrọ MOV ma ọ bụ MP4 dị ka mmepụta format na popped elu window. Pịa OK. Gị YouTube video ga-ahụ ga converted ihe iMovie-enyi na enyi format na obere oge. Mgbe ahụ ebe converted YouTube faịlụ na-echekwara na-emeghe iMovie, họrọ File> Bubata> Movies mbubata faịlụ.
> Resource> iMovie> iMovie: Bubata Video / Photo / Audio faịlụ ka iMovie